काठमाडौँमा बीयरसँगै फोहोर र लेदो बेच्ने कम्पनीको नयाँ ब्राण्डको बीयर पोखरा पुग्यो ! पिउनुअघि राम्रोसँग बोतल हेर्नु जाति !
ARCHIVE, POWER NEWS » काठमाडौँमा बीयरसँगै फोहोर र लेदो बेच्ने कम्पनीको नयाँ ब्राण्डको बीयर पोखरा पुग्यो ! पिउनुअघि राम्रोसँग बोतल हेर्नु जाति !
काठमाडौँ - बोतलमा बीयरसँगै लेदो बेच्ने गोर्खा ब्रुअरीको अर्को प्रोडक्ट टुबोर्ग 'क्लासिक बियर' पोखरामा पनि पाइने भएको छ । साढे ६ प्रतिशत 'अल्कोह'ल रहेको यो बियर ६ सय ५० एमएलको बोतलमा बजारमा उपलब्ध छ भने यो बियरको मूल्य ३ सय १० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यता यसअघि टुबोर्गमा लगातार अखाद्य बस्तु भेटिएपछी टुबोर्ग बदनाम हुँदै आएको छ । विशेषगरी चाडबाडका समयमा धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने हुँदा बोतल सफा नै राम्रो सँग नगर्दा बोतलभित्र लेदो भेटिने गरेको जानकारहरुको भनाइ छ । यता कम्पनीले उच्च प्रविधिबाट बोतल सफा गर्ने गरेको दावी गरेपछि बजारमा फोहोरी बोतलमा लेदो सहितका बीयरहरु छ्यापछ्य्पति पाइने गरेका छन् ।
ज्यानमारा टुबोर्गको कर्तुत नम्बर २ - बोतलभित्र लेदो र फोहोर, मान्छेको 'महेल' भएको ग्राहकको दावी (भिडियो प्रमाणसहित)
टुबोर्ग बीयर पिउनेहरू होसियार ! (भिडियोसहित)
प्रकाशित : Tuesday, July 11, 2017